Ny tranofiara voalohany amin'ny vanim-potoana faharoa an'ny SEE dia misy | Avy amin'ny mac aho
Hatramin'ny vanim-potoana voalohany an'ny SEE premiered, dia saika tsy mbola nanana vaovao momba ny famokarana ny vanim-potoana faharoa isika, vanim-potoana faharoa. izay ilay tranofiara voalohany nalefan'i Apple tao amin'ny fantsona Apple TV + YouTube.
Amin'ity vanim-potoana faharoa ity, ny fandraisana anjaran'i Dave Bautista, fantatra amin'ny filalaovana an'i Drax ao amin'ny sarimihetsika Guardians of the Galaxy sy noho izy tompon-daka tamin'ny WWE mavesatra taloha. Hanomboka ny faran'ny volana aogositra izao ny fizarana faharoa, amin'ny 27 aogositra izao.
Araka ny ahitantsika ny rakitra an'ity andiany ity ao amin'ny IMDB, Dave Bautista handray anjara amin'ireo fizarana 8 rehetra mandrafitra ity vanim-potoana faharoa ity. Miaraka amin'i Bautista, miverena Jason Momoa, Eden Epstein, Tom Mison, Hoon Lee, Olivia Cheng, David Hewlett ary Tamara Tunie ary koa Sylvia Hoeks ho Mpanjakavavy Kane sy Christian Carmago ho Tamacti Jun, endri-tsoratra efa nifankahitanay tamin'ny vanim-potoana voalohany.
Ny fe-potoana farany dia nanambara fa efa nanavao ity andiany ity i Apple tamin'ny vanim-potoana fahatelo ary efa an-dàlam-pandrosoana efa any Canada. Toa an'i Apple no nanapa-kevitra mitifitra ny vanim-potoana faharoa sy fahatelo, izay mety ho famantarana fa ny vanim-potoana fahatelo no ho farany.
Tsy dia voarain'ny mpitsikera tsara i See
Amin'ny Rotter Tomaty, ny vanim-potoana voalohany an'ny SEE dia manana a Isa kritika 43%, raha mampiakatra ny naoty ho 85% ny vahoaka. Araka ny nambaran'i Apple nandritra ny fampisehoana ny Apple TV +, amin'ny sehatra video streaming dia hanome valisoa kalitao noho ny habetsahana izy, ary amin'izao fotoana izao dia toa tsy nahatratra ny tanjony voalohany ity andiany ity, farafaharatsiny araka ny tsikera.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » JEREO ny andiany XNUMX Fampirimana voalohany misy ankehitriny